Degso KMSpico loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (3.20 MB)
Soo dejiso KMSpico, bilaash Windows activation, barnaamijka hawlgelinta Office.
Maxay Tahay Inaad Soo Degsato KMSpico?
Waxay bixisaa hawl aan xadidnayn, aan xadidnayn, firfircoonaanta nolosha ee nidaamka hawlgalka Windows iyo barnaamijka Xafiiska. Waxaan dhihi karaa habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee loo hawlgaliyo loona sharciyeeyo Microsoft Windows nidaamka hawlgalka iyo barnaamijka Microsoft Office. Waxaan kula talinayaa qofkasta oo raadinaya barnaamijka hawlgelinta Windows / Office-virus-virus-laaan
Waa maxay KMSpico?
Qalabka ugu amniga badan ee firfircoonida, ruqsad siinta, hawlgelinta bilaashka ah ee nidaamka hawlgalka Windows (10, 8.1, 8, 7, Vista) iyo barnaamijka Microsoft Office (2016, 365, 2013, 2010).
Sidee looga hawlgeliyaa Windows / Office Activation leh KMSpico?
Qalabka hawlgelinta iyo shatiyeynta ee aan kula talin lahaa kuwa adeegsada nidaamka hawlgalka ee Microsoft ee Windows iyo xafiiska xafiiska ee Office ayaa ugu sarreeya liiska. KMSpico, oo ah barnaamij firfircoon oo bilaash ah, nadiif ah oo sharciyeysan oo Windows ah, wuxuu taageeraa nidaamyada 32-Bit iyo 64-Bit. Si ka duwan firfircoonaanta KMS, waxay ka saareysaa xaddidaadda 180-maalin iyadoo dib loo dejinayo miiska laba jeer maalintii. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhaqaajiso Windows iyo Office nolosha. Sidoo kale waa wax fudud in la isticmaalo. Si aad u hawlgeliso Windows iyo Office, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa; Furitaanka KMSpico oo gujinaya badhanka guduudan. Waxaad yeelan doontaa rukhsad ruqsad Windows iyo Office ilbiriqsiyo gudahood.
Fura Password RAR: getkmspico.com
Noocyada Windows ee aad ku hawlgeli karto KMSpico:
Windows Vista Ganacsiga / N
Windows 7 Xirfadle / N
Windows 8 (Dhammaan)
Windows 8.1 (Dhammaan)
Windows 10 (Dhammaan)
Noocyada Xafiiska ee aad ku Kicin KMSpico:
Xafiiska 2010 (Dhammaan)
Xafiiska 2013 (Dhammaan)
Xafiiska 365 (Dhammaan)
Xafiiska 2016 (Dhammaan)
Noocyada Server Server Windows Waad ku Hawlgelin Kartaa KMSpico:
Server 2008 Heer / Datacenter / Ganacsi
Server 2008 (R2) Heerka / Diiwaangelinta / Ganacsiga
Server 2012 Heerka / Datacenter / Enterprise
Server 2012 (R2) Heer / Datacenter
Hawlgelinta Windows (firfircoonaan) barnaamijka soo dejinta
Hawlgelinta Windows (firfircoonaan)
Hawlgalka Windows 7 (firfircoonaan)
Windows 8.1 firfircoonaan (firfircoonaan)
Hawlgalka Windows 10 (firfircoonaan)
Hawlgelinta Windows Vista (firfircoonaan)
Kordhinta Windows 10 Office 365
Windows 10 fayraska hawlgelinta bilaash ah
Barnaamijka hawlgelinta Windows
Barnaamijka hawlgelinta Windows 7
daaqadaha 8 barnaamijka hawlgelinta
Barnaamijka hawlgelinta Windows 8.1
Barnaamijka hawlgelinta Windows 10
Barnaamijka hawlgelinta Windows Vista
Ruqsad siinta Windows
Cusboonaysiinta liisanka Windows
Barnaamijka shatiga Windows
Hawlgelinta Microsoft Office (firfircoonaan)
Hawlgelinta Office 365 (firfircoonaan)
Xafiiska 2016 hawlgelinta Turkiga (firfircoonaan)
Xafiiska hawlgelinta Office 365
Qalabka hawlgelinta Xafiiska KMS
Cabirka Faylka: 3.20 MB
Wararkii Ugu Dambeeyay: 03-07-2021